10 Safarada Lamaanayaasha La Raadinayo | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Safarada Lamaanayaasha La Raadinayo
Jacayl, xiiso leh, Xeebaha Talyaaniga, Alps faransiiska bannaanka hore ee albaabka, ama meel ka mid ah Shiinaha, kuwan sare 10 safarada lamaanaha la doonayo ayaa kaa yaabi doona.
1. Safarka Lamaanayaasha Ugu Raadinta Badan: Nasashada Magaalada Jacayl Ee Paris
Waxyooday in filimada ugu jacayl, Paris waa goobta ugu jacaylka badan ee loogu talagalay safarka lammaanaha Hollywood-ka ah. Magaalada ugu jacaylka badan, oo ka mid ah kuwa ugu safarka badan adduunka, wali waa had iyo jeer waana halka loogu jecelyahay lamaanayaasha.
Haddii aad dareen u hayso wax kasta oo Faransiis ah, patisserie, Jardiinooyinka Faransiiska, iyo luuqyo soo jiidasho leh, ka dib biririf magaalo in Paris waa adiga kugu habboon. Waxaa intaa dheer, safar jaceyl ah oo uu ku tagayo Paris waa meesha loogu jecelyahay lamaanaha jecel kalaqaawinta, iyo ku noolaanshaha la vie en kacay.
2. Lammaanayaasha la Raadinayo intooda badan waxay u safrayaan Talyaaniga: Amalfi Coast
Cuntada, views breathtaking, iyo badda, ka dhig xeebta Amalfi mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay safarada lamaanayaasha. Guryaha midabada badan leh ee ku yaal buuraha dushooda, waddooyinka rogrogmada, iyo badda dhinaceeda, waa waxa kaliya ee aad uga baahan tahay lamaanaha koolkoolinaya’ vacation.
Xeebta Amalfi waa a 50 kiiloomitir xeeb oo luuq luuq yar oo soo jiidasho leh, xeebaha, iyo hoyga safarka ee qarsoon oo leh aragtiyo lama ilaawaan ah. Waad safri kartaa, ama qorrax madoobaad, karinta, ama wax ka cunaya mid ka mid ah maqaayadaha xeebta ku wanaagsan. Fursadaha ku yaal Xeebta Amalfi waa kuwo aan dhammaad lahayn, xitaa magaalooyinka yar yar ee ku teedsan xeebta Talyaaniga, kaliya qaado!
Milan ilaa Naples oo Tareen la raacayo
Florence ilaa Naples Tareen
Venice oo ku socota Naples Tareen
Pisa ilaa Naples Tareen
Oo leh buuro dhaadheer oo naxdin leh, muuqaallo muuqaal ah, iyo dhaqan soojiidasho leh, Scotland waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka. Isle of Skye waa mid ka mid ah gobollada quruxda badan ee Scotland, oo waxaad u baahan doontaa ugu yaraan 2 toddobaadyo si aad ugu raaxaysato quruxdeeda badan.
Haddii aad rabto inaad ku qanciso aragtida, ama aad ku ogaatid lug mid ka mid ah jidad socod badan, Isle of Skye waa yaab dabiici ah. Tusaale ahaan, hadaad tihiin lammaane isjecel, markaa waxaad jeclaan doontaa inaad ogaato qaab dhismeedka Quiraing. Dhanka kale, waxaad kuheli kartaa xoogaa waqti jaceyl ah barkada Fairy, ama booqashada qalcadda Dunvegan iyo beerta.
In si kale loo dhigo, Isle of Skye waa meel la yaab leh oo loogu talagalay safarka lamaanaha, waad ku mahadsan tahay meelaha quruxda badan ee Scottish-ka, dooxooyinka, iyo xeeb yaab leh. halkan, gacanta waad ku socon kartaa, si fudud ugu wada raaxeysta tacaburka.
4. Lammaanaha Ugu Raadinta Badan Dalxiis Dalxiis ee Switzerland
Iyada oo meelaha sare ee barafka, seeraha cagaaran, iyo aragtiyo muuqaal qurxoon oo u eg sawirro, Switzerland waa lamaane lama filaan ah safarka socdaalka. Safarada lamaanayaasha loogu doon doonista badan yahay Switzerland waa Zermatt, Rhine Falls, iyo dooxada Lauterbrunnen. Haddii aad jeceshahay dhiirrigelinta markaa Zermatt waa meesha ugu habboon ee barafka laguugu talagalay adiga, iyo haddii aad rabto inaad ku nasato goob qurux badan, markaa dooxada Lauterbrunnen ayaa ku habboon.
Switzerland waxay leedahay lamaanayaal safar aan dhammaad lahayn ku tagaya, marka runti waxay kuxirantahay hadafyadaada xaga jacaylka jaceylka. Si kastaba ha ahaatee, waxaad heli doontaa baro badan oo jaceyl ah, bishii labaad oo malab ah, ama si fudud maxaa yeelay waxaad dooneysaa inaad midba midka kale daryeelo, munaasabad gaar ah. Sidaa darteed, it is really recommended to plan at least 7 safarka maalinta ee Switzerland.
Lucerne ilaa Lauterbrunnen Tareen
Ku abuur Lauterbrunnen Tareen
Lucerne ayaa Lagu Kala Qaaday Tareen
Zurich oo Tareen lagu Dhex Dhexaadiyay
Cunto weyn, jawi layaableh, iyo baro jaceyl oo badan oo qarsoon. Safar ay ku tagayaan Venice ayaa ku jira liistada baaldi kasta oo lamaane ah. Tirada dalxiisayaasha u safraya Venice sanad walba waa mid aad u fiican, sikastaba, quruxdeeda iyo quruxdeeda ayaa ku soo jiidan doonta mar kasta. Dhab ahaan, waa soo jiidasho badan, in aadan xitaa ogaan doonin qof walba, oo kaliya waqti la yaab leh ku hel markaad ka baxdo jacaylkaaga.
Safar ay ku tagayaan Venice waa midka ugu sareeya 5 inta badan lamaanayaasha la doonayo ayaa safra maxaa yeelay waxay ku habboon tahay dhammaadka usbuuca. Magaalada waxay leedahay aragtiyo badan, Cuntada Talyaaniga, iyo xulashooyin waafajin oo cajiib ah, markaa waxaad ka heli doontaa janno gondola ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto inaad baxsato oo aad ogaato waxyaabaha ku wareegsan gunta talyaaniga markaas Venice, waxaad tagi kartaa mid ka mid ah kuwa badan safar maalinle ah oo ka yimaada Venice.
Milan oo ku socota Venice Tareen
Florence ilaa Venice Tareen
Bologna ilaa Venice Iyadoo Tareen la raacayo
Treviso ilaa Venice Tareen
6. Lammaanaha Loo Raadinayo Inta Badan Fasaxa Glamping: Alps-ka Faransiiska
Glamering waa mid ka mid ah isbedelada safarka ee ugu kulul Yurub, oo lagu daray Alps-ka Faransiiska, idinkuna waxaad leedihiin lamaanayaasha ugu jacaylka badan’ safar. Kaamam noocan ahi waa ka koolkoolin badan yahay kana raaxaysan yihiin teendhooyinka aasaasiga ah. Deji duurjoogta iyo dabeecadda quruxda badan, oo leh aragtiyo yaab leh oo ku saabsan buuraha Alps ee Faransiiska.
Ku soo dhex qulqulaya bungalowgaaga gaarka ah, qol raaxo leh, soo kicinta shimbiraha heesaya, qaxwo, oo aad toos uga baxdo albaabka – sheeko xariir. Marka buulkaaga jacaylkiisu si buuxda u qalabaysan yahay, iyo meelaha ugu muuqaal qurxoon, uma baahnid wax kale fasax lama iloobaan ah oo jacayl ah.
Lyon ilaa Nice Tareen
Paris ilaa Nice Tareen
Cannes ilaa Paris Tareen
Cannes ilaa Lyon Tareen
7. Amsterdam: Nasashada Fasaxa Guryaha
Amsterdam waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu xiisaha badan Yurub ee lamaanayaasha, iyo joogista doonta doontu waa tan ugu jacaylka badan Amsterdam. Doomaha guryaha lagu raaco waa mid ka mid ah astaamaha Amsterdam, la dhigto kanaallada. Si kastaba ha ahaatee, mar alla markii aad soo dhex gasho, waxaad ka heli doontaa mid aad u fiican, dhow, lagana gaashaamo dadka badankood bogaanta kanaallada.
Shaki la’aan, Amsterdam vibes, jawi, dhaqanka, quruxduna quruxda lamaanayaasha adduunka oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, aragtida magaalada iyo webiga, kafateeriyada ka baxsan daaqaddaada, baxsigaaga jacayl wuxuu noqon doonaa riyo.
Suuqyada cuntada weyn, soo jiidasho leh Notting Hill, Kensington Gardens, lamaane safar ugu baxa London waa safar lama ilaawaan ah. Magaalada waxeey qabataa howlo fara badan, markaa waxaad u malayn kartaa inay ku badan tahay baxsiga jacaylka.
Sidaa darteed, waxaa mudan in xoogaa cilmi baaris ah la sameeyo, meesha ugu fiican, iyo waxyaabo aad runtii rabto inaad sameyso. In si kale loo dhigo, diyaarso liistada suuqyada iyo meelaha soojiidashada ah ee aad rabto inaad booqato. Intaa waxaa dheer, waqti badan uga tag is biirsadka kuwa badan baararka dusha sare. Nuxurka safarka oo dhami waa soo celinta jaceylka oo wada qarxaa.
9. Lamaanayaasha La Raadinayo Kuwa Ugu Raadinta Badan Dalka Talyaaniga: Safarka Khamriga ee Tuscany
canab ah, buuro cagaaran oo cagaar ah, iyo Cuntada Talyaaniga, safar Talyaani raasumaalka khamriga wuxuu ku jiraa liiska baaldi walba. Ku dhex lugaynta beeraha canabka ah, khamrigaaga cas, oo ku mashquulsan jawiga xasilloon, Xaqiiqdii waad ku raacsan tahay in Tuscany uu u dhawaaqayo ilaah.
Dhab ahaantii, Tuscany waa mid ka mid ah lamaanaha ugu sareeya safarada sanad kasta. Aragtida sixirka iyo khamrigu waxay soo jiitaan lamaanayaasha adduunka oo idil, iyaga oo ka dhigaya inay sanad walba soo noqdaan.
Florence ilaa Milan Tareen
Milan oo ku socota Florence Tareen
Venice ilaa Milan Tareen
10. Lamaanayaasha La Raadinayo Inta Badan Dalka Shiinaha: Wabiga Yulong
Shiinaha waa meel xiiso leh, iyo Yulong River waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan uguna xiisaha badan. Webiga Yulong waa qeyb ka mid ah Li River, dheer oo aan dhammaanayn, oo ay ku wareegsan yihiin beero cagaaran, tuulooyinka, iyo beeraha bariiska. Sayidka, ku socdaal tacabur webiga Yulong waa khibrad sixir ah.
Waxa intaa dheer in qurux dabiici ah, ah Wabiga Yulong waxay hoy u tahay tuulooyin badan iyo dad qowmiyadeed. Sayidka, waxaad heli doontaa fursad naadir ah oo aad kubarato habka nolosha ee aagga Yangshuo, dhaqanka, iyo fanka, sidii ay ahayd qarniyo sannado ah.
halkan at Save A tareenka, waanu ku faraxsanaan doonaa inaan kaa caawino qorsheynta mid ka mid ah kuwan 10 lammaanaha inta badan la raadsado tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "10 Safarada Lamaanayaasha Loo Raadinayo" bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fmost-wanted-couples-trips%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ru si / fr ama / luqadaha de iyo ka badan.
#hindiga labada isqabta CouplesTrips RomanticCities RomanticEurope RomanticTrips RomanticViews